EDO: Mmetụta itinye ọnụ na ndị ahịa na Mgbasa Ozi TV | Martech Zone
EDO: Mmetụta itinye ọnụ na ndị ahịa na Mgbasa Ozi TV
Mgbe ndị mmadụ na-atụle mgbasa ozi dijitalụ, ha na-ahapụkarị ọwa mgbasa ozi ọdịnala dịka telivishọn na redio. Ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ụnyaahụ abụghịzi naanị mgbasa ozi… Ha na-ejide akara njikọta na ojiji ruo nke abụọ. A na-edekọ mmekọrịta ọ bụla ị na-eme na ntanetị gị ka ọ dịkwuo mma iji bulie mmemme na iche mgbasa ozi. Ihe etinyeburu uru nke ọrụ iyi ọhụụ na-abanye ugbu a na mgbasa ozi telivishọn ọdịnala.
Zọ dị mma iji weghara ebumnuche ịzụta bụ site na itinye mgbasa ozi televishọn na ihuenyo nke abụọ nyocha ọchụchọ. Onye na-azụ ahịa na-ele azụmahịa ma na-achọ ihe ahụ na ekwentị ha ma ọ bụ mbadamba. Otu ụlọ ọrụ na - eduga n’ịhazi azụmahịa ndị a bụ Edo. Ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere mgbasa ozi TV na-adabere na data ha iji tụọ etu ikuku TV nke mba ha si eme ka ndị ahịa banye ahịa ha na ịzụta ọwa mmiri. Ha egosipụtala ugboro ugboro na njikọta ndị ahịa na-ekpughe zuo ebumnuche. Ha na-akpọ teknụzụ Njikọ aka Search.
Gịnị bụ Njikọ Aka Search?
Njikọ aka Ntugharị na-eme mgbe onye na-azụ ahịa gbanwere site na a n'efere nnata nke ozi ihe onye na-arụsi ọrụ ike na usoro ịzụta site na ịntanetị maka onyinye onye mgbasa ozi. Site na ikwado ikuku ikuku na ọrụ ọchụchọ, EDO na enyere ndị mgbasa ozi aka iduzi ndị ahịa ọfụma site na nsị ahịa ha ruo na azụmahịa.
Ntinye aka Ntughari: Oge nke Eziokwu
Etu esi etinye aka na TV Ad:
EDO jikoro aka tinye aka na ndị ahịa gafee ụdị ndị bụ isi na ngwaahịa, na-ewekọ data dị iche iche iji kpọọ njikọta ndị ahịa na mgbasa ozi mgbasa ozi akọwapụtara.
Na-esite na usoro EDO nke akụkọ mgbasa ozi mgbasa ozi (TV Ad Database) ha data sayensi otu na-amalite onu ogugu enwere ugbua nke na-emeghe ihe omuma bara uru nye ndi na ere ahia na ndi erere ahia.
Ndị ahịa na-eji nghọta ndị a eme ihe iji tụọ arụmọrụ nke ihe okike ha, mgbasa ozi TV, mkpọsa TV, na mbọ ndị asọmpi ha.
Ndị ọkachamara EDO na ndị ahịa na-arụ ọrụ inyocha ajụjụ ndị dị mgbagwoju anya iji bulie ma melite mkpọsa ga-eme n’ọdịnihu site n’iwezuga omume nke TV ndị kachasị arụ ọrụ na ịnya Ntinye Aka.
EDO kwadoro mgbasa ozi telivishọn ma dozie ya na data ọchụchọ 24/7 na-enweghị mkpa nyocha nyocha tupu oge. Na EDO, ụlọ ọrụ nwere ike:
Tụọ otu mkpọsa TV gị na-arụ - Nyochaa otu mkpọsa gị na-eme ma e jiri ya tụnyere mkpọsa gara aga, yana ma ọ na-enweta oke oke nke itinye aka na Ntinye Aka. Tụọ arụmọrụ gị na mmemme dị ndụ yana njikọta ọ bụla ị kwadoro.
Na-ebuli ihe okike na ezigbo oge - Duzie ndu A / B nke ihe okike gi na TV n'enweghi oru ma obu nkwadebe. Nyochaa ntinye aka nke ndị ahịa maka usoro ọ bụla, wee bulie atụmatụ okike na ntụgharị gị.
Mara ebe mgbasa ozi gị na-eme ka akara aka gị - Efu na netwọkụ, ihe ngosi, ma ọ bụ ụbọchị ndị na - eme ngwa ahịa kachasị ukwuu, ma kpachara ụgwọ data iji gosipụta ROI.
Benchmark megide mkpọsa nke ndị asọmpi - Ghọta ebe mkpọsa ndị ọzọ na - arụ ọrụ ka ị nwee ike ịsọ mpi karịa. A na-ejikọ data EDO kpamkpam ma ọ chọghị ozi ndị ahịa nkeonwe.
Pịa ndị ọkachamara EDO maka nyocha miri emi - Ndị otu ha ga - enyere gị aka ịkpa iche ma nyochaa uru ọ bara nke agwa ọ bụla nke ikuku mgbasa ozi TV. Ghọta mmetụta nhọrọ ị na-eme dịka usoro mgbasa ozi, oge mgbasa ozi, ngalaba ọdịnala, ma ọ bụ njikọta, na itinye ya n'ime ngalaba azụmahịa.
Rịọ EDO Demo
Tags: mkpọsa ngwá ahịazuo ebumnuchetelivishọnTV na-akpọsa